Waa maxay Ujeeddada Bixinta? Sidee Loo Isticmaalaa Si Loo Wanaajiyo Heerarka Beddelka? | Martech Zone
Ganacsi ahaan, waxaad gelisay wakhti badan, dadaal, iyo lacag sidii aad u samayn lahayd degel cajiib ah ama goobta ganacsiga e-commerce. Dhab ahaantii ganacsi kasta iyo suuqleyba si isku mid ah waxay u shaqeeyaan si adag si ay u helaan booqdayaal cusub oo boggooda… waxay soo saaraan bogag wax soo saar oo qurux badan, bogag degitaan, waxyaabo iwm waayo.
Marar badan, in kastoo, booqdahaasi yimaado oo akhriyo wax kasta oo ay awoodaan… ka dibna ka tago boggaaga ama goobtaada. Tan waxaa loo yaqaanaa an bixitaanka ee falanqaynta. Soo-booqdayaasha kaliya kama lumin goobtaada, in kastoo… waxay inta badan bixiyaan tilmaamo muujinaya inay baxayaan. Tan waxaa loo yaqaan ujeedada bixitaanka.
Waa maxay Ujeeddada Bixinta?
Marka booqdaha boggaga uu go'aansanayo inuu baxo, dhowr waxyaalood ayaa dhacaya:
jihada - Cursorkooda jiirka ayaa kor u qaadaya bogga dhanka ciwaanka browserka.
xawaaraha - Cursorkooda jiirka ayaa laga yaabaa inuu ku sii degdego dhanka ciwaanka browserka.
tilmaam - Cursor-kooda mouse-ka kama sii guurayo bogga oo way joojiyaan duubista.
Khubarada wanaajinta beddelka ayaa aqoonsaday habkan oo waxay kood fudud ku qoreen bogag ilaaliya cursorka jiirka oo saadaalin kara marka booqdehu uu baxayo. Marka la aqoonsado habdhaqanka ulajeedka bixitaanka, waxay bilaabaan soo-bandhig bixitaan…
Soo-bandhigyada ujeeddada ka-baxdu waa qalab cajiib ah waxayna caddeeyeen waxtarka:
Bixi a sicir-dhimis si uu booqdaha u joogo fadhiga oo uu wax u iibsado.
Kor u qaad soo socda dhacdo ama bixin oo booqdaha ha u diwaan galiyo.
Codso cinwaanka emailka si aad ugala qaybqaadato iyada oo loo marayo warside ama iimaylka safarka otomaatiga ah.
Intee in le'eg ayay u tahay ka-baxitaanka damaca-boosyada?
Sida laga soo xigtay ilo kala duwan, ganacsigu wuxuu filan karaa 3% ilaa 300% korodhka hawlgelinta iyada oo ay ugu wacan tahay hagaajinta heerka beddelka ee waxtarka leh (CRO) qalab. Ugu yaraan, maxaad isku dayday inaad la xidhiidho booqde aad ogtahay inuu baxayo? Waxay iila muuqataa mid aan caqli-gal ahayn! Cilmi baarista u horseeday xogta macluumaadka hoose, Visme waxay heshay 5 faa'iidooyin ee Bixitaanka Pop-ups:
Waxay gabi ahaanba waxtar u leeyihiin ka-qaybgalka booqde ka tagaya goobtaada.
Way ka faragelin yar yihiin kuwa soo booda ee soo muuqda inta lagu guda jiro isdhexgalka booqde ee goobtaada.
Waxay bixiyaan wicitaan-ficil cad oo bilaa carqalad ah (CTA).
Waxay xoojin karaan soo jeedintaada qiimaha ee aad hore u ogeysiisay booqdaha.
Wax khatar ah kama jiraan… ma jiraan wax ka haray oo lumaya!
Infographic, Hage Muuqaal ah oo lagaga baxo Pop-ups: Sida kor loogu qaado heerka beddelkaada 25% habeen dhaxa, Visme waxay bixisaa anatomy ee guusha bixitaanka ujeedka pop-up, sida ay tahay in ay u muuqato, u dhaqmo, iyo in loo dejiyo. Waxay bixiyaan tilmaamahan soo socda:
U fiirso naqshadeynta.
Hubi in ay xaalad ahaan khusayso waxa ku jira bogga.
Bixi hab looga baxo ama lagu xiro popup-ka.
Ha xanaaqin… uma baahnid inaad muujiso fadhi kasta.
Ku dar marag-kac ama dib-u-eegis si aad u taageerto soo jeedintaada qiimaha.
Wax ka beddel oo tijaabi qaabab kala duwan.
Mid naga mid ah Soo iibso macaamiisha, goob ay ku ka iibso dharka online, Waxaan hirgelinay soo-boodka ujeedka bixitaanka anagoo adeegsanayna Klaviyo qiimo dhimis leh qaataha ayaa heli doona marka ay ku biiraan liiska boostada. Waxa kale oo aanu galnay macmiilka socdaal yar oo soo dhawayn ah oo u soo bandhigay astaanta, alaabta, iyo sidoo kale sida loo raaco astaanta warbaahinta bulshada. Waxaan helnaa qiyaastii 3% booqdayaasha inay isdiiwaangeliyaan, 30% kuwaa waxay isticmaaleen koodka dhimista si ay wax u iibsadaan… ma xuma!
Haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto qaar ka mid ah tusaalooyin dheeraad ah oo soo baxay ujeeddooyinka bixidda, halkan waxaa ah maqaal kugu dhex socda qaababka, soo jeedinta, iyo talada ku saabsan abuuritaanka:
Ka bax Ujeeddada Tusaalooyinka soo booda
Tags: baxsidiyaarad biraawsarkaheerka sare u-rogiddasicir-bararkafadhiqiimo dhimisEmail Marketingdiiwaangelinta emaylkabixitaankaka beddeliddaujeedada bixitaankainfographicKlaviyotilmaamaha jiirkaxawaaraha jiirkafoomka soo boodadukaankafiiri
E-mailka Erayada Mawduuca Mawduuca Kaas oo Kiciya Shaandhooyinka Spam oo Kugu Jideeya Galka Junk